DESIGN any an-tanàna → Fototry ny trano kely eto an-tanàn-dehibe ☆ Metalco ☆ Bellitalia
DESIGN AN-TANANA - izahay dia solontena tokana eo amin'ny tsena poloney an'ny orinasa italiana:
METALCO • Bellitalia • DESIGN FISORANA
Manasa ny antoko liana rehetra izahay hiara-hiasa studio maritrano i mpamorona, mivantana na aminay Fikambanan'ny mpanao maritranompikambana manohana antsika izahay.
Manasa anao anao any amin'ny foibe vaovao misy anay izahay Warsaw at ul. Fort Służew 1b / 10 amin'ny tantara iray, miavaka Fort 8.
Eto dia atolotray ny fivoriana sy ny fihaonambe ho an'ny mpiara-miombon'antoka sy ny mpanjifantsika amin'ny fandraisana anjaran'ireo mpanao asa tanana italiana.
Metalco - dia orinasa italiana natsangana tamin'ny taona 1984.
Ankehitriny izy dia iray amin'ireo mpamokatra lehibe indrindra mari-trano kely tanàna an'izao tontolo izao.
An'ity vondrona ity ihany koa ny orinasa Bellitalia i DESIGN FISORANA.
Ny fahombiazan'ny varotra METALCO dia vokatry ny fikarohana sy traikefa mitohy amin'ny sehatry ny famolavolana, fiaraha-miasa miaraka amin'ny mpamorona sy ny arisialy tsara indrindra, ary ny fampiasana ireo teknolojia sy fitaovana farany.
Ny vokatra METALCO dia aseho amin'ny alàlan'ny fomba sy ny endriny tsirairay, izay atambatra miaraka amin'ny kalitao tsara dia manavaka azy ireo amin'ny tsena eran'izao tontolo izao. Ny fomba famokarana sy teknolojia rehetra dia tanterahana amin'ny fanajana ny fitsipiky ny ekolojia sy ny fiarovana ny tontolo iainana.
Manasa anao izahay hiara-miasa.
Bellitalia dia orinasa italiana, ampahany amin'ny vondrona METALCO, natsangana tamin'ny 1962.
Mamokatra singa mandrafitra ny maritrano avy any an-tanàn-tsoka rehetra, PDM, HPC, UHPC, granita sy marbra mitambatra, ary koa ny voaroy sy ny zaridaina. FIVORIANA MISY.
Izy io dia fitaovana fanaovana havaozina miovaova manome alalana anao hamorona endriny mahery sy mateza.
Malaza amin'ny fanangonany tsy manam-paharoa io vilany voninkazo i dabilio, seza misy refy hafahafa, milanja 3,5 taonina taonina ary endrika tsara tarehy granita voajanahary na marbra voajanahary.
Amidy am-pahombiazana manerana izao tontolo izao izy ireo dia vokatra tsy manam-paharoa noho ny dingana teknolojia sy ny famolavolana.
Famolavolana tanàna dia orinasa italiana tafiditra ao amin'ny Tarika Metalco manarakaraka BELLITALIA.
Izy io dia mameno ny tolotra omen'ny orinasa roa vavy.
Izy io dia orinasa tanora izay noforonin'ireo mpamorona tanora ny famoriam-bola, izay manome hevitra vaovao momba ny fanangonam-bokatra, ho famenon-tena lehibe amin'ny vokatra avy amin'ireo mpiara-miasa efa zokiolona, ​​za-draharaha avy any Metalco.
Ny vokatra azony dia lafo kokoa mandritra ny fitazonana ny famolavolana mahafinaritra, kalitao ary mateza.
Ny kianja filalaovana maoderina dia mamela fahafinaretana tsy misy fetra sy azo antoka eny ankalamanjana tsy ho an'ny ankizy amin'ny sokajin-taona rehetra, fa ho an'ny tanora ihany koa. Milalao amin'ny savily sy fitaovana rehetra napetraka eo amin'ny kianja filalaovana, indrindra rehefa tanterahina miaraka amin'ny namana, dia tsara ...
Amin'izao fotoana izao, ny fanaka an-dalambe dia ahitana koa rakotra hazo. Ireo singa miasa sy aesthetic ireo dia azo atao amin'ny fitaovana isan-karazany. Ireo hazo hita eny an-tanàn-dehibe dia antoky ny fahasalaman'ny mponina, fialan-tsasatra ary fahatsapana fahatsapana ho an'ny olona mijanona ao amin'ny tontolo maitso. ...
Ireo rafitra diso fanamboarana eo amin'ny dity dislamection fog dia maina dia azo ampiasaina amin'ny toerana maro. Amin'izao fotoana izao, rehefa mandinika fomba mahomby hanilihana efitrano, dia ireo vahaolana toy izany dia matetika no raisin'ireo tompon'andraikitra amin'ny fahasalamana ...
Ny toby famonoana otrikaretina / tobin'ny fahadiovana tanana dia zava-baovao amin'ny fanoloranay ho singa maritrano kely. Vahaolana manamora ny famonoana otrikaretina sy fanariana fako io tanana io. Misintona katalaogy sy pricelist >> Manasa sy mamono otrikaretina tanana dia hetsika lehibe mamela ny ...
Ny maritrano kely kely dia namboarin'ireo zavatra maritrano kely izay nampidirina tao amin'ny faritry ny tanàna na napetraka tamin'ny fananana manokana, manome endrika manokana amin'ny toerana iray. Tsangambatra mivaingana, dobin-trano maoderina, famafazana, tabilao, vilany voninkazo, kozongo lasy, fantsona bisikileta, ...
Marina fa ny asan'ny mpanao mari-trano dia asa tsy miankina afaka mitondra fahafaham-po be sy tombontsoa ara-materialy, fa ny fomba hanombohana miasa ho mpanao mari-trano dia tsy tsotra na fohy. Ho fanampin'ny dingana mazava ho azy amin'ny fandalinana sy ny fandalinana mafy dia tsy maintsy ...